ग्यास्ट्रिकका बिरामीले दशैँमा बिर्सिएर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र आमाशय सुनिने खतरा – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/ग्यास्ट्रिकका बिरामीले दशैँमा बिर्सिएर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र आमाशय सुनिने खतरा
काठमाडौँ । नेपालीलाई राम्रैसँग दशैं लागिसकेको छ। मिलेसम्म घरमै खसी काट्ने नभए छिमेकसँग मिल्ने या बजारबाट मासु ल्याएर पकाउने परम्परा नै हो। रातो टीका र जमराको पर्व भनेर चिनिने दशैं मासुबिना टार्न हत्तपत्त नेपालीको मन मान्दैन।
मानव शरीरमा धेरै हुने समस्यामध्ये ग्याष्ट्रिक पनि एक हो। खानपानको असन्तुलन र हेलचेक्राइ गरेमा यो रोग लाग्दछ। चिकित्सकीय भाषामा ‘प्रिभ्रेन्सन इज बेटर द्यान क्युर’ भनिन्छ। त्यसैले रोग लाग्नुभन्दा पहिले सावधानी अपनाए रोग लाग्नै रोक्नु उत्तम हो। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई खानपिनको कारण ग्याष्ट्रिक भएको देखिन्छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आमाशयका भित्तामा भएको इन्फ्लायिसन सुन्निएर रातोरतातो भएर दुख्ने समस्या भयो भने आमाशयका भित्ताको श्लेष्म झिल्ली च्यातिएर घाउ हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई भने अल्सर भनिन्छ। ग्यास्ट्राइटिस विकराल रुप नै अल्सर हो।
किन हुन्छ ग्याष्ट्रिक ?
त्यसो भए के खाने त ?
दहीमा हुने प्रोबायोटिक बटर मिल्कुले पनि ग्याष्ट्रिकलाई ठिक गर्न सहयोग गर्छ।
ग्याष्ट्रिकका बिरामीले के नखाने ?
यसबाहेक अनावश्यक रुपमा दुखाई कम गर्ने पेन किलर औषधीहरु सेवन नगर्ने। सेकुवा लगायतका पोलेका खानेकुरा, मद्यपान र धुमपान नगर्ने। खाना एकैपटक धेरै खानुभन्दा थोरै(थोरै पटक(पटक गरेर खाने। नियमित समयमा सुत्ने र नियमित समयमा उठ्ने कुरालाई इमान्दार भएर पालन गर्ने।
पाकिस्तानी महिला सांसदको गोप्य अश्लील भिडियो बाहिरियो, संसारभर भाइरल (भिडियोसहित)
अब गर्भवती महिलाको पेटमा छोरा छकि छोरी यसरी पत्ता लगाउनुहोस् ।